Ruushka oo maalintii labaad duqaymo ka gaysanaya Suuriya - BBC Somali
Ruushka oo maalintii labaad duqaymo ka gaysanaya Suuriya
Image caption Duqaymaha Ruushka waxaa durbaba la sheegayaa in ay ku dhinteen dad rayid ah.
Ruushka ayaa maalintii labaad qaaday weerarrada cirka ee uu ka gaysanayo gudaha waddanka Suuriya.
Wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay mar kale bartilmaameedsadeen goobo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada kooxda Khilaafada Islaamiga ah, oo ay ku jiraan godad ay rasaasta ku keedsadaan.
Ruushka ayaa sheegay in ay baacsanayaan Kooxda Dowladda Islaamiga ah iyo kooxaha kale ee aadka loo yaqaan, waxa ayna bartilmaameedyada ku xulanaysaa iyadoo la shaqeynayso milateriga Suuriya.
Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa waxa ay ku eedeeyeen Ruushka in uu isku dayayo in uu Madaxweyne Bashaar Al-Assad ka caawiyo inuu weerraro fallaagada qunyar socodka ah.
Mareykanka waxa uu sidoo kale ku eedeeyay in duqaymaha Ruushka ay yihiin kuwo lagu bartilmaameedsanayo mucaardka madaxweyne Asad, waxa uuna ka digay in duqaymahaasi ay sii fogayn karaan colaadda madaahiibta ku salaysan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergei Lavrov, ayaa si adag u difaacay tallaabooyinka dalkiisa uu ka sameynayo gudaha Suuriya.